चर्चामा बाँदर 'राजा', जसले मानिसको जूम्रा निकाल्ने देखि कान सफा गर्नेसम्मको काम गर्छ
काठमाडौं – तपाईं कत्तिको सहयोगी हुनुहुन्छ ? कतै तपाईंले भन्दा धेरै यो बाँदरले त गरिरहेको छैन ?
यो बाँदर कहाँदेखि कसरी आयो भन्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलेको छैन । बाँदरको नाम 'राजा' राखिएको छ । यस बाँदरको आमाको मृत्युपश्चात स्थानीय ट्राफिक प्रहरीले यस बाँदरलाई आफ्नो साथ राखेको बताइन्छ । एजेन्सीका अनुसार, बाँदर कमजोर हुँदा दिनेश नामका एक प्रहरीले उनको धेरै नै सेवा गरे । अहिले ती प्रहरी इलाहाबार कुम्भको मेलामा सुरक्षाका लागि खटिएका छन् । बाँदर भने शहरमै घुमिरहेको छ ।
बाँदरले केही दिनअघि मात्रै गान्धी स्टेडियम सडकमा एक मोटरसाइकलमा यात्रा गरेको थियो । मानिसहरूको भिडमा बाँदर निकै रमाइरहेको देखिन्थ्यो । बाँदरको बानी भने अचम्म अचम्मको छ, जब कसैले उसलाई धपाउन खोज्छ, उसले सलाम गर्छ र मानिसलाई क्षणभरमै फकाइदिन्छ ।
यस बाँदरले कहिले कोही मानिसको कान सफा गरिदिन्छ भने कसैको कपालबाट जूम्रानिकालिदिन्छ । यो बाँदरको तस्वीर समेत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । एजेन्सी
कोरोनाका कारण लिफ्टको बटनमा आयो यस्तो परिवर्तन